Xog: Ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa Nabadsugidda Somalia oo kala tagay. – Hornafrik Media Network
Xog: Ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa Nabadsugidda Somalia oo kala tagay.
By HornAfrik	 Last updated Aug 18, 2017
Ciidamadda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, Kuwooda sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan ayaa hadda u muuqda inay gabi ahaanba burbureen, taasoo uu ka shaqeeyay Taliyaha NISA, C/laahi Sanbaloolshe.
Ciidanka Gaashaan oo ka koobnaa dhawr Kun oo Askari, haystana tababarka ugu sareeya ee Ciidamadda Soomaalida, iyo Qalabka ugu tayadda fiican ayaa dhawaan lagala baxay Xeradooda Xalane Qalab Ciidan oo muhiim u ahaa hawlahooda, iyadoo sidoo kale la waayay Rasaas Kayd u ahayd Ciidanka, Waxayna taasi sababtay in Shirkadii Maraykanka ahayd ee gacanta ku haysay ay qaado tallaabo ah inay soo xirxirto qaar ka mida Ciidankii Xeradaasi ku xaraysnaa ee Gaashaan.
Ciidamadda la soo xirxiray ayeey Shirkadda Maraykanka ah keeneen Xarunta Baarista Nabadsugidda Somalia iyagoo soo qoray Qoraal ay ku cadaynayaan waxay ku tuhmayaan iyo in lagu sameeyo Baaris, Balse Sanbaloolshe ayaa markiiba amray in Ciidankaasi la keeno Xafiiskiisa, Wuxuuna siiyay Baabuur iyo Qalab hor leh, isagoo ku biiriyay Ciidanka Xasalinta.
Shirkadda Maraykanka ayaa ka carootay inaan lagu samayn baaris Askartii ay soo tuhmeen, Waxayna la wadaageen Cabashadooda Taliska Sirdoonka Maraykanka ee Xalane oo Shirkadan qandaraas ku siiyay inay u tababarto Ciidanka Gaashaan. Waxaana Talisku uu cabashadii keenay Xafiiska Taliyaha oo haddana iska indha tiray cabashadaasi. iyadoona kadib isagoo aan qofna la tashan uu Taliye Cusub u magacaabay Ciidanka Gaashaan oo lagu magacaabo Axmad Aadan, isagoo Taliyihii hore ee Gaashaan oo lagu magacaabo Caynte isna u soo wareejiyay Xarunta Habar Khadiija ee Taliska NISA.
Tallaabooyinkan uu qaaday Sanbaloolshe waxay sababeen inay meesha ka baxdo Wadashaqayntii u dhaxaysay Sirdoonka Maraykanka iyo NISA, Waxaa sidoo kale gabi ahaanba ay joojiyeen Maraykanku Tababaradii iyo Qalabayntii Ciidanka Gaashaan, iyagoo sidoo kale jartay Miisaaniyad dhaqaale oo ay ku kabi jireen Ciidanka NISA.
Sanbaloolshe ayaa tan iyo markii loo magacaabay Agaasimaha NISA waxaa hoos u dhacay shaqadii Hay’adda, Waxaana uu sidoo kale ku fashilmay inuu wax ka qabto Ammaanka Caasimadda Muqdisho, iyadoona ay dhaceen mudadii uu xilka hayay Qaraxyadii iyo Dilalkii ugu badnaa.
Xog: Dagaal aan waxba la isku reeban kadib Muxuu salka ku hayaa Heshiiska Xasan Sh iyo Sh Shariif,?
Dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo soo saaray war-murtiyeed ku saabsan iskaashiga isgaarsiinta labada dal